Propolis | Tantsaha anaty aterneto | December 2019
Ny fampiasana tsindrona propolis amin'ny aretina isan-karazany
Ny tantely dia tsy mamokatra tantely fotsiny, fa koa vokatra mahasoa toy ny propolis. Ny Propolis dia vongan-tsiranoka mavo mavo. Miaraka amin'izany, mamono ireo zavamananaina velona ny tantara, manala tantely ny tantely, mameno lavaka tsy ilaina ao amin'ny trano fisakafoanana. Miaraka amin'ny fanampian'ny fitaovana manokana, ny mpijinja dia manangona propoly avy amin'ny honahona sy ny rindrina.
Ahoana no fomba hanomanana sy hampiharana propolis amin'ny alikaola
Ny tolo-kevitry ny propolis momba ny alikaola dia ampiasaina betsaka, na izany aza, mba hampahafantarana ny toetra mahasoa ny propolis, ny fototarazony dia tsy tokony ho voaomana tsara, fa koa raisina tsara. Eto ambany eto dia hojerentsika hoe ahoana no ahafahana manova ny toetran-dry propolis amin'ny alikaola, rehefa azonao itondrana azy, ary rehefa mety hanimba io fitsaboana io.
Ny tombotsoan'ny ronono amin'ny propolis
Ny vokatra bee dia efa nanaporofo ny heriny manasitrana mahagaga ary miaraka amin'ny fandrosoana ankehitriny dia manampy ny olombelona hisoroka aretina maro. Ny fampiasana propolis dia iray amin'ireo fitaovana fialamboly izay nahalaza laza nandritra ny taonjato maro. Nianatra nampiasa azy ireo tamin'ny endriny matevina sy matanjaka izy ireo, ary noho ny fanamafisana tsaratsara kokoa azy dia manomana izany amin'ny ronono.
Latabatra homamiadana mifototra amin'ny propolis: vokatra sy fampiasana ara-pahasalamana
Koa satria nianatra nanangona tantely ny olona, ​​dia nanomboka nampiasaina ho fanafody ny vokatra azo avy amin'ireo bibikely mahasoa ireo. Ao amin'ny tontolo maoderina, apotherapy (avy amin'ny teny grika: "Apis" - bee) dia ampiasaina betsaka amin'ny fitsaboana nentim-paharazana sy nentim-paharazana. Ity lahatsoratra ity dia hifanakalozana iray amin'ireo vokatra bevava manan-danja - propolis, ny fiantraikany amin'ny vatan'olombelona, ​​ny fanoherana ny fampiasana azy, ary koa ny fiomanana natao tamin'ny fototra.
Bee propolis: inona no ilaina, inona no manampy, ahoana no haka propoly sy vokatra mifototra amin'izany
Maro ireo vokatra vita amin'ny labiera no ampiasaina mba hanehoana ny aretina isan-karazany mandritra ny zato taona mahery. Ny iray amin'ireo vokatra ireo dia propolis, izay tsy dia mazava loatra amin'ny endrika ivelany, fa manana toetra mahasoa maro. Diniho amin'ny an-tsipiriany bebe kokoa hoe inona izany ary ahoana no azo ampiasana izany. Inona no propolis Propolis, na, araka ny iantsoana azy, ouza na lakaoly vita amin'ny labiera, dia vokatra avy amin'ny beekeeping.
Propolis misy tantely: inona no ilaina, inona no fihinana, ahoana no anaovana azy, aiza no hitehirizana
Ny tantely dia fantatra amin'ny olombelona hatrizay hatrizay. Efa an-taonany maro ny tantarany. Toy izany koa ny vokatra vita amin'ny bee. Efa nahita foana ny olona ho azy ireo. Ny menaka tantely miaraka amin'ny propolis dia zava-mahadomelina izay manana toetra miavaka, satria samy manana ny lanjany ny roa amin'izy ireo na amin'ny tenany na ao anatin'izany.
Tapa-kevitra ny hisotro toaka amin'ny alikaola: torolàlana ho an'ny fanomanana sy fampiasana
Ny fianakaviana bee, afa-tsy ny tantely malaza, dia mitondra vokatra mahasoa. Anisan'izany ny propoli. Io fanasitranana fanasitranana io dia mahasoa amin'ny endriny mangatsiaka sy amin'ny endrika tinctures, izay hanampy amin'ny fanafoanana ireo aretina isan-karazany. Momba ny fampiasana ny propolis tincture - ny lakaoly novokarin'ny volon-tsoavaly, izy io dia manolotra ny tantely manontolo amin'ny tantely mba hanakanana ny tebiteby amin'ny rambony na ho toy ny karazam-borona amin'ny tantely.
Ahoana ny fomba fampiharana vahaolana amin'ny propolis, ao an-trano
Ny vokatra azo avy amin'ny tsimok'aretina dia efa nampiasaina nandritra ny fotoana ela, na ny fanafody ofisialy sy ny pharmacologie aza dia manaiky ny vokatry ny tantely, mofo vita amin'ny mofomamy, propolis ary jelly, ary mampiasa azy ireo ho toy ny fitaovam-piadiana amin'ny fanafody. Ao anatin'ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny toeram-pitsaboana propolis (lavenona vita amin'ny labiera), izany hoe ny vahaolana entiny. Ilaina sy manasitrana ny ranon-tantely ny propolis Amin'ny alàlan'ny famokarana vitamin, antioxidants sy ny zavatra hafa, ny molotra vita amin'ny labia ary ny fiomanana miorina amin'izany dia manana ny toetra ilaina toy izany: mampitombo ny fiarovana ny vatana; manampy ny mijanona ny fandatsahana; tone up; fanaintainana; manasitrana ratra; manimba fungi; mamelona ny tavy moka; dilem-pitiliana; mampihena ny mari-pànana hamerina hery; omeo ny rafi-pitabatabana; manamaivana ny tsindrona sy ny fery; rejuvenate; manatsara ny fizotran'ny metabolic; Mandrangaranga ny dingana efa antitra.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Propolis